Volley-ball «Can U18 Feminin» : Tompondakan’i Afrika ny Faraona i Egypta (NewsMada) | AEMW
Volley-ball «Can U18 Feminin» : Tompondakan’i Afrika ny Faraona i Egypta (NewsMada)
Ny tovovavin’i Egypta no tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, eo amin’ny taranja volley-ball, sokajy zandriny U18 vehivavy. Nitana ny laharana voalohany teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika mantsy izy ireo.
Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany 2017, amin’ny taranja volley-ball, sokajy U18 vehivavy ny Faraona avy any Egypta. Norombahin’ny tovovavy egyptianina mantsy ny tompondakan’i Afrika (Can U18), nampiantranoin’i Madagasikara. Fihaonana, natao tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ary nifarana omaly alahady.
Raha tsiahivina, tsy nisy afa-tsy firenena telo monja ny niady izany toerana izany : i Madagasikara, mpampiantrano, i Maorisy ary i Egypta. Nahazo fandresena roa tamin’ireo lalao roa nataony ny Faraona avy any Egypta.
Samy tamin’ny seta 3 noho 0 avokoa ny nandresen’izy ireo an’i Maorisy sy i Madagasikara, nandritra ny fifanintsanana ka nametraka azy ireo teo amin’ny laharana voalohany. Hita fa efa ambony ara-teknika sy taktika ny tovovavin’i Egypta ary voaporofo izany, tamin’ny endri-dalao nasehony. Anisan’ny tombony ho azy ireo koa ny fananany halavana izay nanahirana ireo mpifanandrina taminy.
Hanampy an’i Tonizia sy Alzeria ary Kenya, izay efa tafita avy hatrany amin’izany fiadiana ny ho tompondaka eran-tany izany, ry zareo Faraona. Fihaonana izay mbola hotapahina amin’ny fivoriamben’ny federasiona iraisam-pirenena, hatao any Arzantina ny volana oktobra ho avy izao, ny toerana sy ny fotoana hanatanterahana azy.
Na teo aza iny vokatra iny, tsy nitsanga-menatra ny ekipam-pirenena malagasy satria nitana ny laharana faharoa. Nandresy an’i Maorisy, tamin’ny seta 3 noho 0 (25/21 ; 25/22 ; 27/25), mantsy ny mpilalaon’i Léé, omaly alahady.
← Faritra Vatovavy Fitovinany : nanaovana fiaraha-midinika ny hamerenana ny taloha (NewsMada)
Toamasina : manakaiky vahoaka ny fitsarana (NewsMada) →